Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Uru Lufthansa na -achọ iwelie ijeri US $ 2.5
Airlines • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • investments • News • Transportation
Na June, eTurboNews kọrọ amaka atụmatụ nke German Lufthansa Airline Plan nke mmụba isi obodo.
A na -atụ anya na ego a ga -enweta ga -abụ nde euro 2,140. Ọnụ ego ndenye aha nke EUR 3.58 kwa New Share kwekọrọ na mbelata nke 39.3% na TERP (ọnụahịa ikike nweburu ikike).
Ndenye aha bụ 1: 1. A ga -enye ndị na -ekenye ụlọ ọrụ ihe ọhụrụ ahụ n'oge ndebanye aha, nke a na -atụ anya na ọ ga -amalite na Septemba 22, 2021 wee kwụsị n'October 5, 2021.
A na -atụ anya azụmaahịa ikike ga -amalite na Septemba 22, 2021 wee kwụsị na Septemba 30, 2021.
Ejikọtara ụlọ akụ a n'ụzọ zuru ezu site na ụlọ akụ 14. Na mgbakwunye, ọtụtụ ego na akaụntụ n'okpuru njikwa nke BlackRock, Inc. abanyela na nkwekọrịta ndebanye aha maka ngụkọta nke nde euro 300 ma kpebisie ike iji ikike ikike ndebanye aha ha mee ihe.
Ndị otu niile nke ndị isi oche nke ụlọ ọrụ ahụ agbawokwa mbọ isonye na mmụba isi obodo na iji ikike ikike ndenye aha niile enwetara n'ihe metụtara oke ha.
Mmụba isi obodo pụtara iji kwalite ọnọdụ nha nha otu a. Companylọ ọrụ ahụ ga -eji ụgbụ a kwụrụ iji kwụghachi ntinye aka Silent I nke Economic Stabilization Fund nke Federal Republic of Germany (ESF) na ijeri euro 1.5.
Na mgbakwunye, Companylọ ọrụ ahụ na -ezube ịkwụghachi ntinye aka Silent II n'ụzọ zuru ezu na ego ijeri euro 1 na njedebe nke 2021 ma bu n'obi ịkagbu ego ntinye aka Silent I na njedebe nke 2021.
ESF, nke nwere 15.94% nke isi ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ a, ebidola ịmalite mbubata mmasị nhatanha ya na ụlọ ọrụ ahụ tupu ọnwa isii ka emechara mmụba isi obodo, ma ọ bụrụ na ESF denye aha na mmụba isi obodo. N'ime ihe omume a, a ga -emezigharị ya ihe na -erughị ọnwa 24 ka emechiri mmụba nke isi obodo, ma ọ bụrụhaala na ụlọ ọrụ ahụ kwụghachi Silent nsonye I na Ntinye Silent II dị ka eburu n'obi.
Onyinye ihu ọha nke New Shares na Germany bụ naanị site na dabere na nchepụta nchekwa nke German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) kwadoro, nke a ga -ewepụta, n'etiti ndị ọzọ, na webụsaịtị otu Lufthansa . A na -atụ anya na a ga -enye nkwado a na Septemba 20, 2021. Agaghị enye onyinye ọhaneze na mpụga Germany na ụlọ ọrụ na -ahụ maka iwu agaghị anabata ma ọ bụrụ na ọ bụghị.